ikhaya/Ukhuphiswano/I-Ashampoo WinOptimizer 19-Isoftware yokuCwangcisa iPC -Sipha iilayisensi ezi-5
Vangelis10. Meyi 2021
ahampoo ikhuphe iWinOptimizer 19 namhlanje. Imalunga nesoftware eyaziwayo yokuhambisa isoftware ukukhawulezisa nokucoca iiWindows. Sinikezela ngenkqubo yokwenziwa kwenkonzo kwaye siyavuya ukukunika ithuba lokuphumelela enye yeelayisensi ezi-5 kwirrafti yethu.
I-Ashampoo WinOptimizer 19
I-Ashampoo WinOptimizer 19 iqinisekisa ukuba iWindows ichaziwe kwaye ke ukusebenza ngakumbi kuyafezekiswa. Ngokucofa nje okumbalwa, nanjengomntu obekekileyo, ungasebenzisa i ukwenza Lungiselela ikhompyuter yakho ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo.
I-Ashampoo WinOptimizer 19 ithatha apho iWindows ishiye khona. Ngokusebenzisa Iimodyuli zokucoca (ukucoca) Umkhangeli webrawuza, iifayile zethutyana kunye nentsalela kufakelo zinokucinywa kwaye ngenxa yoku Indawo yokuqhuba kanzima ukhuthalelo lwe
e Ukuba bucala I-Ashampoo WinOptimizer 19 inexabiso elikhulu. Ngokunikezelwa Ulawulo lweNtloko kunye nokuBucala Ukudluliswa kwedatha kuncitshiswe kakhulu.
Imisebenzi ezenzekelayo yenza iiWindows kwi Ukucoca idatha yenkunkuma, le Ubhaliso lulungisiwe kunye Inkqubo yokuqalisa ikhawulezile.
Imisebenzi emithathu ezenzekelayo iqinisekisa Ukucoca idatha yenkunkuma, Ukuqala okukhawulezileyo kweenkqubo kunye namandla enkqubo epheleleyo xa udlala. Ukuthintela iimpazamo kunye nokukhawulezisa ngakumbi iiWindows, iWinOptimizer 19 icoca irejista, icime iindlela ezimfutshane ezingafunekiyo kwaye itshintshe iindlela ezimfutshane iinkonzo kwaye Ungeniso lokuqalisa vele uhambe.
IZiko leBoot lokuhlalutya nokukhawulezisa ukuqala kwenkqubo
Ukuqala ngokuzenzekelayoImodyuli ebonisa amaxesha okuqala kweenkqubo ezizodwa kunye neenkqubo zokusebenza
Jonga yonke imisebenzi yeWindows ngokufanelekileyo kwaye uyenze ingasebenzi xa kukho imfuneko
Imodyuli yomphathi wabucala inamandla kulawulo lwabucala
Ngokubanzi ucofe iqhosha elinye
Uhlalutyo lwenkqubo eyandisiweyo yokwenza ngokukhawuleza kwayo yonke imimandla ebalulekileyo
Ukufikelela kwizixhobo ezili-10
Umlawuli weMenyu yokuBhala
Umphathi woLwandiso lweSikhangeli
Ugqirha weDiski yoMvavanyi weHDD
Inkqubo yokubuyisela umphathi
Umgcini we icon
Umlawuli wamalungelo omsebenzisi
zigaba: Amaxabiso esoftware yenkqubo kunye neelwimi
ixabiso: I-49,99 ye-EURIxabiso lentengo , 49,99 ZAMA, 44,99 TWD
Iilwimi: IsiNgesi saseBritane, isiBulgaria, isiTshayina (Esiqhelekileyo), isiTshayina (Esenziwe lula), isiDanish, Deutsch, IsiNgesi, isiFinnish, isiFrentshi, isiGrike, isiTaliyane, isiCatalan, isiKorea, isiDatshi, isiNorway, iNorway Nynorsk, isiPolish, isiPhuthukezi, isiPhuthukezi (saseBrazil), isiRomania, isiRashiya, isiSweden, isiSerbia, isiSerbia, iSpanish, iSpanish (iArgentina), isiTurkey, Hungarian
CopyTrans Cloudly-Khuphela kwaye ucime iifoto ze-iCloud-Sikhupha iilayisensi ezi-4
Ukubuyiswa kweDatha yeBoysoft: Isoftware yokufumana kwakhona idatha-sikhupha iilayisensi ezi-5
I-Ashampoo ActionCam-sikhupha iilayisensi ezi-5
I-Ashampoo® WinOptimizer 19 -I-Ashampoo WinOptimizer Isicoci seIntanethi Lungiselela irejista Uhlalutyo lwenkqubo Ukulungiswa kwenkqubo Ukugcinwa kwenkqubo Yenza iWindows ngokwezifiso Uqwalaselo lweWindows Lungiselela windows